အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): ခရီးလမ်းဆုံး
ကျမကတော့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ လက်ထောက်ရာထူးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူပါ၊ ယောင်္ကျားကတော့ ဘဏ်မှာ မန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူပေါ့၊ တစ်ခါတော့ အားလပ်ရက် ခရီးအနေနဲ့ မိသားစုတွေ ရွာကို အလည်သွားခဲ့ကြတယ်၊ နေ့ခင်းဘက် ယောက်ခမက အနားယူနေတယ်၊ ယောင်္ကျားက အပြင်သွားနေပြီး ခလေးတွေကတော့ အိပ်ပျော်နေတုန်း အိမ်ခေါ်မိုးပေါ်က လှမ်းထားတဲ့ အဝတ်တွေ သွားရုပ်နေတုန်းမှာ ခြံထဲမှာ တစ်ခုခုလှုပ်ရှားမှုကို သတိထားလိုက်မိတယ်၊ သေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့ ယောက်ခထီးကြီး အိမ်က အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်လို့ နှစ်ယောက်လုံးလဲ အဝတ်အစားတွေ မရှိတော့ကြတော့ဘူး၊ မိုးကရွာတော့မှာမို့ ထင်တယ် အားလုံးကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ လှုပ်ရှားနေကြတယ်၊ အိမ်ဖော်ကို ရှေ့ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်ကနေ ယောက္ခထီးက သူရဲ့လိင်တံကို ထိုးထဲ့နေတယ်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းကနေ အရှိန်တွေမြန်လာတော့ ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံကို ကြည့်မိလိုက်တာ တော်တော်ကို ရှည်တာပဲ၊ ကျမဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ လိင်စိတ်တွေတောင် ထနေမိတော့တယ်၊
ကျမတော့ ယောက္ခမရဲ့ လိင်တံ ရှည်ရှည်ကြီးကြီးကို တွေ့လိုက်ရတာ့ အရမ်းအံ့သြသွားပြီး ပိပိထဲမှာ အရည်တွေတောင် စိမ့်ထွက်လာပြီး ယောက္ခမရဲ့ လိင်တံနဲ့ ဆက်ဆံခြင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေမိတော့တယ်၊ ဒါပေမယ် ကျမ ဘယ်လို ချည်းကပ်ရမလဲ မသိသေးဘူး၊ ၁၅ မနစ်လောက်အကြာမှာ ယောက္ခမက လိင်ဆက်ဆံတာပြီးသွားခဲ့ပြီး မိုးကစရွာလာတော့ အိမ်ထဲကို မြန်မြန်ဝင်လိုက်ပြီး ဘာမှ မသိသလို နေနေလိုကတယ်လေ၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ယောင်္ကျားက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်သွားတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက္ခမကို ချည်းကပ်နေချင်ခဲ့သော်လဲ အချိန်ကလဲမရ ကြောက်စိတ်တွေကလဲ ရှိနေခဲ့တယ်၊ ရုတ်တရပ် အကြံတစ်ခုရလို့တော့……………
ယောင်္ကျားနောက်ကို လိုက်လည်ဖို့ ယောက္ခထီးအပါအဝင် ခလေးတွေအတွက်ရော ရထားလက်မှတ် ဝယ်လိုက်ပြီး ယောင်္ကျားကိုလဲ လှမ်းအကြောင်းကြားထားလိုက်တယ် ယောက္ခထီးကိုလဲ အလည်ခေါ်ခဲ့မယ်ပေါ့၊ ကျမလဲ ရုံးကနေခွင့်ယူထားပြီး ခရီးသွားမယ့်နေကို စောင့်မျှော်နေမိတော့တယ်၊ အဲဒီနေ့ရောက်တော့ ကျမရဲ့ အကြံအစည်ကို တွေးမိပြီး နဲနဲတောင် တုန်လှုပ်နေမိခဲ့ရတယ်လေ၊ ရထားပေါ်ရောက်တော့ ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ယောက္ခထီးရယ် ကျမတို့ရယ် အတွက် အထူးတန်းအိပ်ခန်းရတယ်၊ ကျမစတင်ပြီး ချည်းကပ်သော်လည်း ယောက္ခထီးက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်၊ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျမမရှိလို့လာဆိုတာ တွေးနေရင်း ညသန်းခေါင်အထိ အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး၊
အိပ်နေရင်း ယောက္ခထီးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ကြည့်နေရင်း ကိုင်ကြည့်ဖို့ ကြောက်နေမိခဲ့တယ်၊ မနက် ၄ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကျမလဲ အိပ်ပျော်သွားရော၊ မနက် ၇ နာရီ အိပ်ရာနိုးလာတော့ ယောက္ခထီးက အိပ်စင်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေပြီး ကျမက အပေါ်ဘက် အိပ်စင်မှာ လှဲနေတော့ အကြံတစ်ခုရလိုက်တော့ အိပ်စင်ပေါ်ကမဆင်းတတ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပြီး ယောက္ခမကို ကူညီဖို့ပြောလိုက်တယ်၊ သူလဲ အိပ်စင်ပေါ်က သက်ပြင်း ညှင်းညှင်းလေးချပြီး ကူညီဖို့ ဆင်းလာတော့တယ်၊ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ခါးကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်လိုက်တယ်၊ ကျမက သူပုခုံးပေါ်လက်တင်ပြီးအိပ်စင်ပေါ်ကနေ အသာလေးလျောဆင်းလိုက်တာ ယောက္ခရဲ့ ရင်ခွင်ထဲရောက်သွားပြီး ဖက်ထားမိသလို ဖြစ်နေရော၊ ကျမရဲ့ ရင်သားတွေနဲ့ သူ့ရင်ဘက်ကို ဖိမိနေသလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီး ကျမလဲကျေနပ်သွားခဲ့ရတယ်၊ နောက်တော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို နေလိုက်ကြပြီး ကျမအတွေးထဲမှာတော့ ပြန်တွေးမိရင် ရင်တုန်နေခဲ့ပြီး ရထားမဆိုက်ခင် အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ ရအောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိတော့တယ်၊ နေ့လည်စာ စားပြီးသွားတော့ ယောက္ခထီးက အောက်ဘက် အိပ်စင်ပေါ်မှာလှဲနေပြီး ခလေး နှစ်ယောက်က ကစားနေကြတယ်လေ၊ ခလေးတွေကိုလည်း အဘိုးကို မနှောက်ယှက်ဖို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အိပ်စင်ပေါ်မှာ ကစားကြနေကြဖို့ ပြောထားလိုက်တယ်လေ၊ ကျမကတော့ ယောက္ခထီးရဲ့ အိပ်စင်မှာ သွားပြီး သူ့ရဲ့ ပေါင်ရင်းနားမှာ နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်နေလိုက်မိတယ်၊ ရထားက လှုပ်နေတော့ ကျမရဲ့ ဖင်က သူ့ရဲ့ပေါင်ရင်းကို သွားထိမိနေတော့ ပထမတော့ ရှောင်ထွက်သွားသေးတယ်၊
ရထားက လှုပ်လေလေ ကျမရဲ့ ဖင်က သူ့ရဲ့ ပေါင်ရင်းနား ဖိမိလေလေပဲ၊ နောက်တော့ ယောက္ခထီးက ကျမဘက်ကို တစ်စောင်းလှည့်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ လိင်တံက ကျမဖင်ကို စပြီးနောက်ကနေ ထောက်နေတော့တယ်လေ၊ သူ့ရဲ့ လိင်တံကြီးက မြွေတစ်ကောင်လို ကျမရဲ့ဖင်ကို ထိုးလိုက် ဖိလိုက်နဲ့ လုပ်နေပြီ ဆိုတာ သတိထားမိနေတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ရဲ့လက်ကလဲ ကျမရဲ့ ဖင်ကို ပွတ်ပေးနေတော့တယ်လေ၊
ကျမရဲ့ လက်တွေကလဲ ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံကို အဝတ်အစားပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်ပြီး သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတာ တွေးမိလိုက်တော့ ပျော်နေမိတယ်၊ ကလေးတွေသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျမသူကို ဖက်လိုက်မိတော့မှာဘဲ၊ ကျမလဲ ထိုင်လျက်နဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ လိင်ကို ကိုင်လိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့ ခလေးတွေ အိပ်ချိန်ရောက်အောင်သာ စောင့်နေမိတော့တယ်၊ ည ၁၁ နာရီထိုးတော့ ခလေးတွေကို အပေါ်အိပ်စင်မှာ အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျမကတော့ အောက်က အိပ်စင်မှာ အိပ်လိုက်တော့တယ်၊ ည ၁၁ နာရီကျော်တော့ ယောက္ခထီးက ကျမရဲ့ အိပ်စင်ဘက်ကို ကူးးလာပြီး အရင်ဦးဆုံး ရင်သားတွေကို ဖိပြီးပွတ်ပေးတော့တာလေ၊
ပြီးတော့ ယောင်္ကထီးက သူအပေါ်ကိုခွတက်ဖို့ပြောတော့ ကျမလဲတက်ကြွသွား ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တာ၊ ရထားက လှုပ်နေတော့ အိပ်စင်ပေါ်မှာ ဘယ်ညာ လူးနေတော့တာဘဲ၊ ဒါကြောင့် ကျမတို့လဲ မတပ်ရပ်လိုက်ကြပြီး အပြန်အလှန် ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိကြတယ်၊ နောက်တော့ သူကကျမရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက်တယ်၊ ကျမကလဲ သူ့ရဲ့ အဝတ်အစားးတွေကို ချွတ်မိလိုက်တယ်လေ၊ ပြီးတော့ ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံရှည်ကြီးကို ကိုင်ပြီး မာကျော တောင့်တင်းလာအောင် အချိန်အတော်ကြာ ဂွေလှိမ့်ပေးနေမိတယ်၊ တော်တော်လေးကြာတော့ သူက လွေပေးပါလို့ တောင်းဆိုတော့တာလေ၊
နောက်တော့ ကျမတို့လဲ 69 ပုံစံနေလိုက်ကြပြီး အပြန်အလှန် လွေပေး ဂျားပေးနေလိုက်ကြတယ်၊ ခဏကြာတော့ ကျမက အိပ်စင်ပေါ်မှာ လှဲလိုက်ပြီး ယောက္ခထီးက ကျမအပေါ်ကနေ တက်လို့ သူ့ရဲ့လိင်တံကို ပိပိထဲကို စထည့်တော့တာ လိင်တံကြီးက ကြီးလွန်းတော့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပြီး ထည့်သော်လဲ နာတာဘဲရှိမယ် မဝင်ပါဘူး၊ နောက်တော့ ပိပိကို တံတွေးလေးဆွတ်ပြီး(ရုတ်တရက် ရထားပေါ်မှာ အုန်းဆီက ဘယ်ကရောက်လာလဲ မသိ၊ ယုတ်တိသိပ်မရှိလို့ တံတွေးနဲ့ လို့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်) တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း စထည့်တော့တာ နောက်ဆုံးတော့ ဝင်သွားတော့တာ၊ လိင်တံက ရှည်လွန်းတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို တိုးဝင်နေပြီး ပါးစပ်ကနေ ပြန်ထွက်လာမလားတောင် ထင်လိုက်ရတယ်၊ “ကောင်းလိုက်တာရှင်” ၊
ကျမလဲ သူလုပ်တိုင်း ဖင်ကို ကော့ပေးနေလိုက်မိတာ ကောင်းလွန်းလို့ ပါးစပ်ကတော့ အသံတွေ ထွက်လာမိတယ်၊ ရထားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက ဆောင့်ချက်တွေကို ပိုပြီးတောင် အကူအညီပေးနေတော့တာဘဲ၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ရထားဥသြသံနဲ့ အတူ ကျမရဲ့ ပိပိထဲလဲ ယောက္ခထီးရဲ့ သုတ်တွေ ပန်းဝင်းလာတော့တာလေ၊ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင် ဖက်နေလိုက်ကြပြီးနောက် ကျမလဲ ပိပိကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ သွားပြီး ပြန်လာတော့ လုပ်ဖို့ ပြန်စကြတာပေါ့၊ ရထားက ရပ်နေရာကနေ ပြန်လဲထွက်ရော ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံက ပိပိထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့တာ ခရီးလမ်းဆုံး ဘူတာမရောက်ခင်အထိ ဆက်ဆံနေကြတော့တာပါဘဲ၊ အိမ်ရောက်တော့လဲ ကြုံရင် ကြုံသလို ဆက်ဆံခဲ့ကြတာ နှစ်တွေ အတော်ကြာအောင်ဘဲလေ၊
Posted by bluegyi at 06:47
ရှင်းသန့် 14 February 2013 at 21:20
ဘီလူးရေ မိုက်တယ်ကွ ကျေးဇူး
Zwenyi Nyitun 15 February 2013 at 01:05
I like this site & thk u very much.
Zwenyi Nyitun 15 February 2013 at 01:06
ရှင်းသန့် 15 February 2013 at 01:27
that 15 February 2013 at 06:22
Unknown 19 February 2013 at 05:19
It is really an exciting story. It happens in real life. Please keep on narrating such an untold stories. Thanking you in advance for your kind sharing.